को बन्दै छ काठमाडौँ महानगर पिता ? – Maitri News
को बन्दै छ काठमाडौँ महानगर पिता ?
काठमाडौँ । आउँदो बैशाख ३१ गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुलुकको राजधानी काठमाडौँमा चुनावी सरगर्मी सुरु भएको छ । राजधानीको महानगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिकामा यस पटक कसले नेतृत्व गर्छ अर्थात् को बन्दै छ त महानगरपालिका पिता ? सबैमा चासो र उत्सकुता बढेको छ ।
करिब दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगरपालिका मेयर तथा उपमयेर लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवारीको तयारी गरिरहेका छन् । नेकपा एमालेबाट काठमाडौँ महानगरपालिका मेयरमा विद्यासुन्दर शाक्य,सानु श्रेष्ठ र केशव स्थापितको नाम चर्चामा छ भने उपमेयरमा रत्ना गुरुङ सिलवाल र शान्ति अधिकारी अग्रपङ्तीमा देखिनुभएको छ ।
एमालेका तर्फबाट महानगरका मेयरमा चर्चामा रहनुभएका विद्यासुन्दर शाक्य पार्टीमा तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि सत्रिय हुनुहुन्छ । अहिले पार्टीको काठमाडौँ जिल्ला कमिटी सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका उहाँले दुई कार्यकाल २१ वडाको वडाध्यक्ष भई कुशलतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्नु भएको थियो । । पार्टीका तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिका हेर्ने जिम्मेवारी पाउनुभएका शाक्य सहरी विकाससम्बन्धी विज्ञका रुपमा पनि काम गरिरहनुभएको छ ।
त्यसैगरी,महानगरपालिका मेयरमा चर्चामा रहनुभएका सानु श्रेष्ठ एमालेको पोलिटव्युरो सदस्य हुनुहुन्छ । काठमाडौँ जिल्ला विकास समितिको सभापति भइसक्नुभएका श्रेष्ठले पार्टीको विभिन्न तहमा बसेर कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी बहन गर्दै आउनुभएको छ ।
अर्का,चर्चामा रहनुभएका मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापित यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख भई काम गरिसक्नुभएको छ ।
त्यसैगरी एमालेका तर्फबाट उपमेयरमा चर्चामा रहनुभएकी रत्ना गुरुङ सिलवाल पूर्वसभासद् हुनुहन्छ । दुई दशकदेखि पार्टीमा सक्रिय रुपमा लाग्नु भएका उहाँ अहिले पार्टीको काठमाडौं जिल्ला कमिति सदस्यका रुपमा रहनु भएको छ भने उहाँले पार्टीले सुम्पेका विभिन्न जिम्मेवारी पूरा गर्दै आउनुभएको छ ।
त्यस्तै उपमेयरका अर्का उम्मेदवार शान्ति अधिकारी अखिल नेपाल महिला संघमा आवद्ध हुुनुहुन्छ । दुई दशकदेखि पार्टीमा क्रियाशील उहाँ जिल्ला कमिटी सदस्यका रुपमा काम गर्दै आउनुभएको छ ।
त्यसैगरी, नेपाली काँग्रेसले तीर्थराम डंगोललाई मेयरमा उठाउने तयारी गरेको छ भने उपमेयरमा भने खासै चर्चित अनुहार देखिएका छैनन् ।
उता नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट मेयरका रुपमा अगाडि सारिनुभएका तीर्थराम डंगोल काँग्रेसमा लामो समयदेखि निरन्तर लागिपर्नुभएका इमानदार कार्यकर्ता हुनुहन्छ । उहाँले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि बहन गरिसक्नुभएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले मेयरमा रेनु दाहाललाई र उपमेयरमा उमेश स्थापितलाई उठाउने तयारी गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले मेयरका रुपमा प्रस्तुत रेनु दाहाल पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी हुनुहन्छ । त्यसैगरी सोही पार्टीका तर्फबाट उपमेयरमा चर्चामा रहनुभएका उमेश स्थापित एमाले,माले हुँदै माओवादीमा पुग्नु भएको हो ।
त्यस्तै, राप्रपाकातर्फबाट मेयरमा राजाराम श्रेष्ठलाई अगाडि सारिएको छ भने उपमेयरमा भने अझै टुंगो लागेको छैन । श्रेष्ठ राजा ज्ञानेन्द्रको शासन कालमा मेयर समेत बन्नुभएको थियो ।